दैनिक जीवनमा गर्ने यी ४ गल्तीले जति कोशीश गरेपनि घट्दैन पेट, झन् बढ्दै जान्छ मोटोपना – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/दैनिक जीवनमा गर्ने यी ४ गल्तीले जति कोशीश गरेपनि घट्दैन पेट, झन् बढ्दै जान्छ मोटोपना
दैनिक जीवनमा गर्ने यी ४ गल्तीले जति कोशीश गरेपनि घट्दैन पेट, झन् बढ्दै जान्छ मोटोपना
के तपाइँ पेट बढेर तनावमा हुनुहुन्छ ? अझ विभिन्न कोशिस गर्दा पनि पेट घटिरहेक छैन ? खाना घटाउँदा पनि मोटोपन घटेको छैन ?
यदि यी प्रश्नको जवाफ ‘हो’ मा आउँछ भने तपाइँले केही गल्ती गरिरहनु भएको छ । हामीले दैनिक जीवनमा गर्ने ४ कारणले हाम्रो मोटोपन र पेट नघट्ने तथ्य पत्ता लागेको छ ।
१- पहिलो कारण दिमाग
२- खानाको भ्रम
यदि दिमागमा निरन्तर तनाव चलिरहन्छ भने यस्ता मानिसले डाइटिङ गर्दा समेत मोटोपन घटाउन सक्दैनन् । तनावका कारण मानिसको वजन आफै बढ्ने एक अध्यनले देखाएको छ । हामीले खाएको खाना तनावका कारण स्ट्रेस हर्मोनमा परिणत हुने र यसले हाम्रो पेट झोलिने बैज्ञानिकहरुको भनाइ छ । तसर्थ टेन्सन लिनु पनि मोटोपन बढाउनु हो ।
३- दिमागी गतिविधी
हाम्रो दिमागमा कुनै न कुनै कुरा चलिरहेको हुन्छ । यदि तपाइँ डाइटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाइँको नजरमा मिठा मिठा खानेकुरा देखिन थाल्छन् । यो तपाइँको नभएर दिगगकै गतिविधीका कारण हुन्छ । शरीरमा हुने फ्याट हर्मोनले पेट झोलिने समस्या हुने बैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । यो हर्मोनले हाम्रो दिमाग सम्म शरीरमा कति क्यालोरी छ र कति थप आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको सन्देश गलत दिने गर्छ ।
४- डाइटिङको उल्टो असर